काठमाडौँ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तरत बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म पश्चिम खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को मस्यौदा तयार भएको छ । चार सय २१ किलोमिटरको बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डको प्रतिवेदन आएको हो ।
चार खण्डमा विभाजन गरेर दुई चिनियाँ कम्पनीले डी.पी.आर. तयार पारेका हुन् । बुटवलबाट गड्डाचौकीसम्मको रेल्वे खण्डको डी.पी.आर. निर्माणको लागि अध्ययन सकिएको हो ।
पश्चिम खण्डको डी.पी.आर. निर्माणको क्रममा पश्चिम खण्डका केही नदीहरूमा बलियो पुल सहितका पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने देखिएको छ । कैलालीको शिवगङ्गा र चौमाला नदी क्षेत्रका डी.पी.आर. का क्रममा ड्रिलिङ गर्दा माथिल्लो सतहमै पानीका ‘पकेट’ क्षेत्रहरू भेटिएका छन् ।
रेल्वे विभागका अनुसार अब ती नदी क्षेत्रमा अन्यत्रकोभन्दा पुल सहितका मजबुत पूर्वाधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । पूर्वी खण्डका यस्तो पानीको पकेट भएको क्षेत्र भेटिएको थिएन । यस्तो पकेटका कारण राजमार्गका पुलमा पनि भासिने समस्या आउने गरेको छ । शिवगङ्गा र चौमाला नदीका पुल यस्तै समस्या कारण भासिएका थिए । अब पश्चिम खण्डमा यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर रेलमार्ग बनाउनु पर्नेछ ।
यो वर्ष सर्लाहीको लालबन्दीदेखि बाराको निजगढसम्म थप खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । करिब ४० किलोमिटरको यो खण्डका लागि १७ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जा तोकिएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि अब १६५ किलोमिटरको निजगढ–भरतपुर–चोरमारा खण्डको डी.पी.आर. मात्रै बनाउन बाँकी छ । पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डको डी.पी.आर. तयार भइसकेको छ ।
अहिले पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई नौ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरू नौ सय ४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौँ, काठमाडौँ–वीरगञ्ज लगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने एक हजार चार सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।